Home TOROHEVITRA FOTOTRA EUROPEAN Mpilalao Football any Belzika Youri Tielemans tantaram-pahaterahana an-tsarimihetsika malaza mbola tsy fantatra
Ny LB dia manolotra ny tantara feno momba ny lalao fiadiana baolina kitra malaza "Tielemans". Ny Ouri Tielemans tantaram-pahaterahana bebe kokoa ny tantara momba ny tantaram-piainana tsy fantatra dia mitondra fitantarana feno momba ny hetsika mahavariana avy amin'ny fahazazany hatramin'ny fahazazany. Ny fanadihadihana dia ny fiainany teo aloha, ny fiainam-pianakaviana, ny fiainany manokana, ny zava-misy ao amin'ny fianakaviana, ny fomba fiainany ary ny zavatra tsy fantatra momba azy.
Eny, fantatry ny rehetra ny fahaiza-manaony roa sy ny tifitra mahafaty. Na izany aza, vitsy ihany no mandinika ny tantaran'i Youri Tielemans izay tena mahaliana. Ankehitriny tsy misy ado, aleo atomboka.
Youri Tielemans Childhood Story Plus Untold Biography Facts - Fiainana tany am-piandohana sy fianakaviana
Manomboka, Youri Marion A. Tielemans dia teraka tamin'ny 7th ny volana 1997 tao Sint-Pieters-Leeuw, Belzika. Izy dia teraka tamin'ny rain'i Flamita sy ny renin'ny kongoley.
Teraka tamin'ny ray aman-dreny izay tsy dia fantatra loatra i Youri Tielemans. Credits: PXhere sy YoungStarlets.
Nipoitra tao Sint-Pieters-Leeuw, any ivelan'i Bruxelles, ny firenena Belzika nifangaroan'ny foko Afrikana sy Alemana izay nitomboany niaraka tamin'ny zokiny lahy sy vavy iray izay tsy dia fantatra loatra tamin'ny fotoana nanoratana azy.
Youri Tielemans dia nobeazina tany Sint-Pieters-Leeuw any Bruxelles, Belzika. Credits: YoungStarlets ary ViaMichelin.
Nipoitra teo amin'ny toerana nahaterahany ny tovolahy Tielemans, izay tsy dia nahataitra loatra tao amin'ny fianakaviany noho ny fitiavan'ny ray aman-dreniny sy ny iray tam-po aminy mpilalao Judo izay nikarakara ny baolina kitra.
Na dia nahazo fampiofanana be dia be aza i Tielemans tao Judo, ny baolina kitra dia ny toerana misy ny fony. Nanomboka nanao ny fanatanjahantena izy taoriana kelin'ny nianarany ny handeha ary tsy ela dia nanohana ny fanohanan'ny ray aman-dreniny izay nisoratra anarana tao amin'ny Akademia Anderlecht fony izy dimy taona.
Youri Tielemans Childhood Story Plus Untold Biography Facts - Fanabeazana sy fanabeazana
Raha tao amin'ny Akademia Anderlecht, ny Tielemans dia nampifandray ny oniversite tamim-pahombiazana tamin'ny fananganana asa amin'ny baolina kitra izay nifameno ny fifanolanana. Isaky ny nangatahana i Tielemans hanoratra lahatsoratra momba ny hoaviny dia hanipy ny fahitany ny lalao momba ny baolina kitra sy ny tsipiriany izay azony hamerenana ny nofiny.
Youri Tielemans dia hanoratra mandrakariva momba ny hoaviny amin'ny baolina kitra mandritra ny fotoam-pianarany. Credits: Pinterest sy YoungStarlets.
Tsy sahala amin'ireo mpilalao baolina matihanina maro, ny tetik'asa momba ny fianarana Tielemans dia tsy nitsahatra tamin'ny zandriny enina. Nanohy ny fianarany tamin'ny diplaoma ambony tao amin'ny Sekolim-pampianarana ao Sint-Guido tao Anderlecht izay nianatra momba ny varotra izy.
Youri Tielemans Childhood Story Plus Untold Biography Facts - Ny fiainam-piarahamonina tany am-piandohana sy ny lalana mankany amin'ny tantara
Tsy mora ho an'ny Tielemans ny fifandonana teo amin'ny akademika sy ny lalao baolina kitra ho an'i Anderlecht. Na dia nampihena ny andro fiofanana nataon'i Tielemans aza i Anderlecht, dia nitaky ny fampandrosoana izy ireo fa tokony hiasa mafy ireo mpilalao baolina kitra mba hiaraka amin'ireo namany izay tsy nahavita ny fiofanana.
Na izany aza, nandresy ireo fanamby i Tielemans tamin'ny fitsanganana tamin'ny laharana. Tamin'ny fotoana niaingan'i Tielemans tamin'ny 16 tao 2013, izy no niantso voalohany ny ekipa lahin'i Anderlecht ho toy ny mpisolo toerana tsy ampiasaina mandritra ireo klioba 1-0 nahazo an'i Genk tao amin'ny 2013 Belgian Super Cup.
Youri Tielemans dia nahazo ny fiantsoana voalohany ho an'ny ekipa lefitra Anderlecht fony izy taona 16. Sary: YoungStarlets.
Youri Tielemans Childhood Story Plus Untold Biography Facts - Mitsangàna mba haka tantara
Herinandro taorian'ny nahazoana ny antso voalohany ho an'ny ekipa ambony indrindra, dia nanao ny ekipa voalohan'ny ekipan'i Andiellecht i Tielemans ho solon'an-dàlana nandritra ny lalao nifanaovan'i Lokeren tao anatin'ny vanim-potoana voalohany tamin'ny vanim-potoana Belgiana Pro League.
Tamin'ny lahasa voalohany, Tielemans no mpilalao tanora indrindra tao amin'ny tantaran'ny ligy. Nankany amin'ny sehatra iray hafa izy tamin'ny naha-mpilalao belarosiana tanora indrindra tao amin'ny UEFA Champions League taorian'ny nanombohany tamin'ny lalao tamin'ny Olympiacos tamin'ny taon-dasa 16 taona sy 148 andro tamin'ny 2 October 2013. Ny ambiny, araka ny filazany, dia tantara.
Youri Tielemans nanohitra ny Olympiacos nandritra ny lahateniny UEFA. Credit: Prokerala.
Youri Tielemans Childhood Story Plus Untold Biography Facts - Fiainana mifandraika amin'ny fiainana
Youri Tielemans dia nanambady tamin'ny fotoana nanoratana. Ampahafantarinay anao ny momba ny tantarany sy ny fiainam-panambadiana. Teo am-piandohana, dia tsy fantatra hoe nisy ankizivavy iray i Tielemans talohan'ny nifankahitany tamin'i Mendy vadiny.
Youri Tielemans miaraka amin'ny vadiny Mendy. Bola: InformationCradle.
Tsy dia fantatra loatra ny fotoana nihaonan'ireo mpivady na nanambady. Na izany aza, ny firaisany dia notahina niaraka tamin'ny zanakavavin'i Melina tsara tarehy. Teraka tamin'ny mpilalao baolina izy fony izy 19 taona tao amin'ny 2017.
Youri Tielemans miaraka amin'ny zanany vavy Melina. bola: Tumblr.
Youri Tielemans Childhood Story Plus Untold Biography Facts - Mitantara ny fiainam-pianakaviana
Tielemans dia avy amin'ny fianakaviana antonony. Mampahafantatra anao ny zava-misy momba ny fiainam-pianakaviany izahay.
Momba ny rain'i Tielemans: Tielemans dia teraka tamin'ny dadan'i Fllamy. Ny tantaram-pianakaviana kely fanta-daza dia ahitana ny mpampianatra sy ny mpampianatra Judo. Tsy misy fisalasalana manakaiky an'i Tielemans izay miresaka azy amin'ny jiro tsara.
Momba ny reny Tielemans: Ny mofomamy Tielemans dia avy amin'ny foko Kongoley. Tahaka ny vadiny, dia miasa amin'ny maha-mpampianatra sy mpilalao Judo azy izy. Fantatra tamin'ny maha-mpitarika ny fanabeazana azy, tsy dia nikarakara ny baolina kitra ny reny Tielemans ary nanome toky fa ny fepetra momba ny fahasalamany ara-akademika dia tafiditra ao anatin'ny fifanarahana voalohany nosoniaviny tamin'i Anderlecht.
Youri Tielemans dia nobeazin'ny ray aman-dreny mpanohana. Nahazoan-dalana. ClipArtsStudio sy Asmonaco.
Momba ny tafiotran'i Tielemans: Tsy dia fantatra loatra ny momba ny rahalahiny sy ny anabavin'i Tielemans izay nanitsakitsaka ny lalan'ny ray aman-dreniny tamin'ny fampiharana an'i Judo. Na dia izany aza dia mifandray amina fifandraisana akaiky amin'ny zanany lahy izy ireo izay nanangana ny tenany ho sehatry ny baolina kitra.
Youri Tielemans Siblings dia mazoto miasa ao amin'ny Judo. Bola: IMGBIN.
Momba ny havan'i Tielemans: Lavon'ny fianakaviana kely tsy fantatra avy any Tielemans dia fantatra amin'ny ray aman-drenibeny sy ny raiben-drenibeny ary ny reniny. Tahaka izany ihany koa, tsy misy rakitsoratra momba ny dadatoan'i Tielemans, nenitoa, vady aman-janahary ary ny havany mbola tsy fantatra amin'ny toe-javatra mitranga eo amin'ny fiainany hatramin'ny fahazazany.
Youri Tielemans Childhood Story Plus Untold Biography Facts - Ny fiainan'ny tena manokana
Inona no mahatonga an'i Youri Tielemans hifantina ?. Mialà sasatra rehefa mitondra anao ny mombamomba ny toetran'i Tielemans hanampy anao hahazo sary feno momba azy. Ankoatra izany, ny Persona Tielemans dia singa amin'ny toetran'i Taurus Zodiac.
Miantehitra, manosika, manodikodimandry izy ary sarotra ny manambara tsipiriany izay mahakasika ny fiainany manokana sy manokana. Manana tombontsoa sy fialam-boly marobe izy anisan'izany ny fampiharana didim-pitsarana, fanaovana basketball, fividianana, fihainoana mozika, fijerena televiziona, filalaovana lalao video ary mihantona amin'ny namana.
Ny fampiharana an'i Judo dia iray amin'ireo hetsika fandevenana an'i Youri Tielemans. Credit: LeSoir.
Youri Tielemans Childhood Story Plus Untold Biography Facts - Fiainana momba ny fiainana
Ny lanjan'ny Youri Tielemans dia mbola eo ambany fanaraha-maso. Na izany aza, manana sanda ara-barotra amin'ny £ 19.80m izy amin'ny fotoana anoratana. Ny fiandohan'ny tsenan'i Tielemans izay tsy dia fantatra loatra dia avy amin'ny karama azony ho toy ny baolina kitra ary ny vola miditra.
Ny maha-iray izay manahy be loatra, miaina fialam-boly mpandala ny nentin-drazana i Tielemans, noho izany dia tsy dia fantatra loatra ny vidin'ny tranony ao Sint-Pieters-Leeuw. Raha mikasika ny fanangonana fiara, Tielemans dia manana Black Audi ary naka sary teo akaikin'ny fiara tsy miangatra.
Youri Tielemans dia manana Audi miaraka amin'ireo fiara tsy dia tsara loatra. bola: Instagram.
Youri Tielemans Childhood Story Plus Untold Biography Facts - Fiainana tsy voatanisa
Mba hamenoana ny tantaram-pitiavan'I Tielemans tantaram-pitiavana sy biographie eto dia misy zava-misy tsy ampoizina izay ampidirina ao anatin'ny bio.
Youri Tielemans dia manana fehikibo manga ao Judo. Avo roa monja izy no tsy nahazo fehikibo mainty talohan'ny nandaozany ny fanatanjahantena.
Manana tatoazy kely eo an-tsofin'ny bicep havia izy.
Ny tati-kevitr'i Youri Tielemans dia eo an-tsoratry ny bicep havia. Bola: WTFOOT.
Tsy dia fantatra loatra ny momba ny fivavahan'i Tielemans satria ny mpilalao baolina midadasika dia tsy niresaka momba ny zavatra inoany toy ny tamin'ny fotoana nanoratana azy.
Tsy voatery nisotro i Tielemans, ary tsy nomena ny fifohana sigara toy ny tamin'ny fotoana nanoratana azy.
Youri Tielemans Childhood Story Plus Untold Biography Facts - Video Summary
Azafady azafady etsy ambany, ny lahatsary Youtube momba an'ity profil ity. -katsaram-panahy Fitsidihana sy famandrihana ho antsika Youtube Channel for More Videos.
MIEZAHA HAHAY: Misaotra tamin'ny famakiana ny tantaram-pitiavanao ny tantaram-pahibemaso ho an'ny Youri Tielemans bebe kokoa momba ny tantaram-piainana tsy fantatra. amin'ny LifeBogger, Miezaka izahay mba hanana ny marina sy ny rariny. Raha mahita zavatra izay tsy mety, dia zarao aminay ny fanehoan-kevitra eto ambany. Hanome voninahitra sy hanaja ny hevitrao foana izahay.